Ọrụ dịịrị ndị nne na nna maka ụmụaka toro eto | Ndị Nne Taa
Ọrụ dịịrị ndị nne na nna maka ụmụaka toro eto
Nke Torres | 23/09/2021 20:00 | Atụmatụ
Mgbe ụmụaka tolitere, ụzọ ha si emetụta ezinụlọ na -agbanwe, n'agbanyeghị na ndị nne na nna nwere ọrụ dịịrị ha oge niile. Na mbụ, e nwere ọrụ dịịrị omume, ndị metụtara ọrụ nna ma ọ bụ nne ma nwee ịhụnanya. N'ihi na ọbịbịa ụmụaka anaghị eme ka ha kwụsị ịbụ akụkụ nke otu otu.
Ịbata ụmụaka n'ụwa bụ ibu ọrụ nye ha, ibu ọrụ nwere ike ịgbanwe n'ime ọtụtụ afọ mana agaghị apụ apụ. Ewezuga ọrụ dịịrị omume, enwere ọrụ dịịrị iwu nke dịkwa mkpa ịmara. Chọpụta ihe bụ ọrụ dịịrị nne na nna n'ebe ụmụ ha nọ mgbe ha mere okenye.
1 Afọ nke ọtụtụ ụmụaka
1.1 Ọrụ omume
Afọ nke ọtụtụ ụmụaka
Dịka nna ma ọ bụ nne, mmadụ na-achọ ihe kacha mma maka ụmụ ha ma site na mgbe amụrụ ha ka ha bụrụ ndị okenye, ndị gụrụ akwụkwọ, ndị na-arụsi ọrụ ike na ndị okenye nọọrọ onwe ha. Nsogbu na -abịa mgbe ụmụaka tolitere na gburugburu oke nchekwa, ebe ha achọghị ịrụ ọrụ iji nweta ihe ha chọrọ, ha anaghị amụta ọgụ maka imezu ebumnobi ha wee bụrụ ndị okenye anaghị arụ ọrụ.
N'okwu a, enwere ike ịnwe ọnọdụ dị mgbagwoju anya nke kwesịrị ịma. N'aka nke ọzọ, enwere ọchịchọ ilekọta na ichebe ụmụaka, mana ịhapụ ịhapụ ha ka ọ na -esiri ha ike maka uto na uto nke onwe ha. N'okwu a iwu na -ekwu na ọrụ dịịrị nne na nna n'ebe ụmụaka nọ n'afọ iwu kwadoro na -agbanwe, n'ihi na ikike nne na nna ma ọ bụ onye na -elekọta ha na -akwụsị, ewezuga ma ọ bụrụ na ụmụaka nwere nkwarụ. N'ọnọdụ a, ọ ga -abụ ndị ọchịchị dị mkpa ga -ekpebi oke ọrụ dịịrị ndị nne na nna n'ebe nwatakịrị nọ.
Nke pụtara na mgbe ha ruru afọ itoolu, ụmụaka na -eburu ibu ọrụ maka onye nke ha na ọ bụ ha n'onwe ha ga -aza ajụjụ maka omume ha. Ugbu a, nchedo onwe onye dị iche na ihe iwu kwuru bụ na nne na nna nwere ọrụ ịzụ, chebe ma hụ na nchekwa ụmụaka ruo mgbe ha nwetara nnwere onwe egon'agbanyeghị afọ ole ha dị.
Ọ dịghị onye na -eche na ya na ụmụ ya ga -enwe esemokwu iwu n'ihi ọrụ dịịrị ha dị ka nne na nna, n'agbanyeghị na a na -enwe ọtụtụ ikpe. Ndị nne na nna chọrọ ma na -ekwu na ha kwụsịrị ịkwado ụmụ ha ka ha nwee ike buru ibu ọrụ. NA ụmụaka na -akọ akụkọ ma na -akwụ ụgwọ ezumike nka maka nri nne na nna. Ikpe na -agbanyeghị ka ha siri nwee mwute, na -eme ugboro ugboro karịa ka e chere.
Agbanyeghị, ọ na -adịkarị ndị nna na ndị nne ịkụziri ụmụ ha ihe site na nwata ka ha bụrụ ndị nwere onwe ha, ndị nwere onwe ha na ndị nwere ọrụ. Ụkpụrụ dị ka ọrụ, mbọ na nraranye bụ isi na agụmakwụkwọ ụmụaka, n'ihi na ọ bụ naanị mgbe ahụ ka ha nwere ike nweta ndụ okenye nke nọọrọ onwe ya na arụ ọrụ. Tupu gị na ụmụ gị abanye n'ọnọdụ mgbu na mgbagwoju anyaKụziere ha ka ha lekọta onwe ha anya. N'ihi na ndị a bụ ọrụ dịịrị ụmụaka, ọrụ ndị iwu kwadoro dị ka ichebe, inye nri, nkuzi na inye ọzụzụ zuru oke.
Kụziere ụmụ gị ihe mmụta dị mkpa dịka mmụta gbasara mmekọahụKụziere ha isi nri, ịrụ ọrụ iji kpata ego inwere onwe ha, lekọta ahụike na ego ụlọ ha. Ọ dịghị mgbe ọ gafeworo ma ọ bụ akaha ime ya, yabụ echela afọ ụmụaka gị dịka ihe mgbakasị ahụ. Site na obere nkuzi kwa ụbọchị, ị ga -enwe ike zụlite ndị okenye ọdịnihu ga -abụ ndị ga -agbanwe ụwa.
Ndị na -eto eto nwere ibu ọrụ na -etinye aka na gburugburu ebe obibi. Ụmụ okorobịa nwere ọmịiko na -anabata ndị dị iche, ndị na -ahụ ndị ọzọ ka nha anya n'agbanyeghị ọdịiche ha. Ụmụaka ịdị n'otu na na -akwanyere ihe niile dị ndụ bi na mbara ala ùgwù na ndị na -alụ ọgụ maka ikike ha niile. Mgbe ahụ ị ga -amata na ị rụọla ezigbo ọrụ dị ka nne ma ọ bụ nna.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị nne Taa » Ezinụlọ » Atụmatụ » Ọrụ dịịrị ndị nne na nna maka ụmụaka toro eto
Ụzọ esi akụziri ụmụaka ihe